झलनाथ खनालको उपचार खर्चको विवरण भयो सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ! – GALAXY
झलनाथ खनालको उपचार खर्चको विवरण भयो सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छ । विकटका जनता ८ सय आर्थिक अभावका कारण ज्यान गुमाइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको झलनाथको उपचारमा ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको हो ।
यो सिटामोल समेत खान नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य जनताका लागि चकित पार्ने खर्च विवरण हो । सरकारले उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गराउने क्रममा खनाल अस्पतालमा ७६ दिन बसेका थिए ।
बिलमा कोठा शुल्क, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया शुल्क, प्याकेज रकम, औषधिलगायत २० प्रकारका शीर्षकमा खर्च उल्लेख छ । असार २ (१६ जुन) मा भर्ना भएका खनाल भदौ १४ (३ अगस्ट) मा डिस्चार्ज भएका थिए ।
उनको उपचारमा डा। सन्दीप गुलेरियासहितको टिम संलग्न थियो । अस्पतालले चिकित्सकको परामर्श शुल्क मात्रै नेपाली १० लाख रुपैयाँ हाराहारी लिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्याकेज चार्ज भनेर नेपाली १० लाख ६७ हजार शुल्क तोकिएको छ । अस्पतालको फार्मेसीका नाममा नेपाली ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिल छ ।